Waa tee kooxda uu doonayo Cristiano Ronaldo inuu ku soo gabo gabeeyo waayihiisa ciyaareed? – Gool FM
Waa tee kooxda uu doonayo Cristiano Ronaldo inuu ku soo gabo gabeeyo waayihiisa ciyaareed?
Byare May 25, 2016
(Madrid) 25 Maajo 2016. Laacibka Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa kula jooga kooxda reer Spain heshiis ka dhacaya ilaa 2018-da.
Kabtanka xulka Portugal ayaana sheegay inuu diyaar u yahay inuu waayihiisa kubbada cagta ku soo afjaro Real Madrid wuxuuna doonayaa inuu heshiis cusub qallinka ku duugo.
31-jir ayaa kula jooga kooxda ka dhisan caasimadda Madrid heshiis ku eg ilaa 2018-da waxaana lala xiriirinayay kooxaha PSG ee dalka Faransiiska iyo inuu dib ugu laabanayo kooxdiisii hore ee Man United.
Schweini: Qof walba in uu Mourinho u ciyaaro ayuu rabaa
Ka bogo xiddigihii ugu qaalisanaa kooxda Arsenal ka hor saxiixooda cusub ee Granit Xhaka + SAWIRRO